Mankao Mosul Ny Irakiana Mba Hankalaza Ny Eid Ho Fanehoana Firaisankina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jolay 2017 9:45 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, عربي, Français, Ελληνικά, English
Pikantsarin'ny Irakiana manerana ny firenena mitsidika an'i Mosul noafahana hankalaza ny Eid. Loharanon-tsary avy amin'ny lahatsary Youtube ‘Mosul mankalaza ny Eid voalohany ao anatin'ny telo taona avy amin'ny fanentanana Eid ao Mosul ‘ nampidirin'ny fantsona AlMawsleya tamin'ny 28 Jiona 2017.
Tamin'ny fahavaratry ny taona 2014, nandroaka ny mpitandro ny filaminana Irakiana ny Fanjakana Islamika ary naka an-keriny hifehy an'i Mosul, tanàna faharoa lehibe indrindra ao Iraka, ao amin'ny faritra midadasika ao avaratr'i Iraka.
Tao Mosul no nanambaran'ny lehiben'ny vondrona milisy, Abu Bakr al-Baghdadi, fa mandrakotra an'i Syria sy Iraka ny Kalifà Islamika.
Nanomboka teo lasa fiainan'ny mponina tao Mosul ny tahotra tahotra, ny fampijaliana ary ny zava-tsarotra hafa.
Niharatsy ny fiainana andavanandro noho ireo fanenjehana ny vitsy an'isa, noho ny tsy fahampian-tsakafo sy solitany, ary ny fampitahorana sy ny fanasaziana mafy.
Nanomboka tamin'ny Oktobra 2016 ny ezaka nataon'ny mpitandro ny filaminana Irakiana hakana indray ny tanàna. Taorian'ny valo volana nisian'ny ady henjana, faritra vitsy monja sisa no teo ambany fifehezan'ny vondrona, nahatonga ny Praiminisitra Irakiana Haidar al-Abadi nanambara vao haingana ny fiafaran'ny Fanjakana Islamika.
Nokarakarain'ny vondrona mpikatroka Irakiana tarihin'i Hamid al-Sayed, Ali al-Touki, sy Mohammed al-Raji ny fanentanana “Eid ao Mosul”.
Hevitra tany am-boalohany hitsidika ireo namana taloha izay tafahitsoka eo ambany fitondran'ny Fanjakana Islamika, nivadika ho fanentanana lehibe ny drafitra rehefa niteraka fahalianana goavana tao amin'ny Facebook. Mihoatra ny 1.700 ny olona naneho ny fahalianany handray anjara amin'ny dia, saingy 300 ihany no afaka mandeha noho ny fepetra ara-piarovana.
Ity Eid ity no voalohany tao anatin'ny telo taona nahafahan'ny Maslawis (vahoakan'i Mosul) ankalazaina ampahibemaso. Feno fisehoan-javatra voaràra nandritra ny fitondrana Fanjakana Islamika, anisan'izany ny famakiana tononkalo, tantara an-tsehatra, sy mozika mihetsiketsika. Nitondra fanomezana boky maherin'ny 1000 avy any Baghdad izay tafiditra ao anatin'ny fanentanana “Iraka aho, Mamaky teny” ihany koa ireo mpitsidika an'i Mosul, hetsika mampiroborobo ny kolontsaina sy ilay Iraka nahita fianarana kokoa. Fanombohana ho fanoloana ireo boky an'arivony nosimbain'ny Fanjakana Islamika tao amin'ireo tranombokin'i Mosul.
Nitondra fifaliana ny andro, nampitambatra ny Irakiana hankalaza ny fety sy hankalaza ny fanafahana an'i Mosul ihany koa. Nameno ny media sosialy ny zava-nitranga, ahitana ireo vehivavy sy lehilahy manerana ny firenena mihira ny hiram-pirenena sy mihiaka hoe “Ry Rahalahy, Sinita sy Shiita, tsy amidy ity firenena ity”, maneho fahatsapana fihamafisan'ny firaisankina eo amin'ny Irakiana.
Raha ny mpikatroka no nikarakara ny ankamaroan'ny hetsika, nanampy ihany koa ny governemanta tamin'ny fanomezana fitaterana sy fiarovana ny hetsika.
شگد چنت أتمنى احضر ? pic.twitter.com/ZKK0ANGBIW
— الموصلي⁩BiLAL ?? (@Bilal_Aldulayme) June 27, 2017
Tonga ao Mosul ny “valamanjohin'ny fahafahana”.
Lehilahy sy ny vehivavy maro no nandray ny “valamanjohin'ny fahafahana” tao amin'ny Oniversiten'i Mosul :
— دَي دَي ?? (@dentist_dalo) June 28, 2017
Nandray ireo mpitsidika avy any Iràka tamin'ny voninkazo sy fitiavana ireo lehilahy sy vehivavy ao Mosul
Mitangorona ny vahoaka no sady mihiaka hoe “tongasoa aty Mosul” ary mihira ny hiram-pirenena ihany koa.
Boky maherin'ny 1000 no natolotra ho fananerana ireo tranomboky ao Mosul.
اعضاء منظمة #أنا_عراقي_أنا_اقرأ يشاركون في تهيئة اكثر من الف كتاب لتوزيعها على الموصليين ضمن قافلة الحرية#العيد_في_الموصل✌?#قافلة_الحرية?? pic.twitter.com/cu416Xmrq8
Manomana boky an'arivony ho alototra ho an'i Mosul amin'ny alalan'ny “valamanjohin'ny fahafahana” ireo mpikambana ao amin'ny hetsika “Irakiana aho, Mamaky Boky”
Ameen Mukdad, mpitendry lokanga avy ao Mosul kosa nitendry hira nentin-drazana Maslawi.
Nofaranana tamin'ny afomanga fankalazana ny Eid sy ny fanafahana an'i Mosul ny hariva.